Enwere ụdị ọ bụla ma ọ bụ ụdị nchịkọta nke nwere ike ịnweta ogo engine engine dị mma?
N'oge a, njirimara ọdịnaya bụ ihe karịrị otu okwu dị mkpa, ma maka ahụmahụ dị omimi, ahụmịhe enyi na enyi na maka nchịkọta nyocha dị mma karị. Nnyocha algorithm nke na-adịbeghị anya nke Google ugbu a enweghịzi ohere maka iji njikọ ejikọta ya, nke na-ejikọta ya na isiokwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ eji eme ihe iji gosipụta ezigbo nsonaazụ ọma. Ma oge ndị ahụ gara ogologo oge gara aga. Taa, ikekwe enweghị ebe nrụọrụ weebụ ga - adị ndụ n'enweghị ọdịnaya dị mma nke na - enye ndị ọrụ ezigbo uru. Ọ bụ ya mere ajụjụ a ji dị oke egwu - olee ụdị ọdịnaya ị ga - enweta iji nweta ọkwa nchịkọta dị mma karịa? N'ụzọ dị mma, enwere m ụfọdụ ezigbo aro iji nyere gị aka - chemical storage midwest. Ọfọn, ka anyị hụ ha n'otu n'otu.
Ọzọkwa, àgwà bụ MUST maka ọdịnaya gị. Ichegharị ọrụ a maka ebe nrụọrụ weebụ gị agaghị ewetara gị ogo ogo engine dị mma. Naanị weghara ya. Ma gịnị na-egosi mma ọdịnaya mgbe niile? Ọtụtụ mgbe, mgbe ndị ọkachamara ọdịnaya nwere ike ịsị "edemede ndị dị mma" ha pụtara otu ihe ederede ederede dị oke mkpa, na-enye ọtụtụ ndị na-ege ntị. Ya mere, iji nwee ọganihu na ọrụ a, m na-akwado ịmepewanye nghọta nke ndị ọbịa gị, nzube ha, mkpa ha, àgwà gị, na mmasị ndị dị elu. Ọzọ, ijide n'aka na ị ga-enwe nsụgharị kachasị elu, ị ga-achọpụta mkpụrụokwu ziri ezi maka ọdịnaya gị. Ime otú a, M na-atụ aro ịhọrọ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka Keywords Research na SEO nyocha, kama iji Google si SERPs iji mara ihe isiokwu ị ga-ewe ma ọ bụ iji wepụ. Nke ahụ agaghị ezuru, naanị ihu ya.
Onye enyi na enyi
Na-esote, na-arụ ọrụ na ọdịnaya dị mma echefughị ​​na ị na-eme ya maka ezigbo mmadụ, ọ bụghị igwe. Ekwuru m na ilekwasị anya na akụkụ uzo nke SEO naanị (dịka njupụta ọnụ ọgụgụ) agaghị eme ka akwụkwọ gị gaa na njikwa search engine kacha mma.Ee, nyocha kachasị mkpa ka dị mkpa, ma gbalịa ka ị ghara iche banyere ya mgbe ị na-emepụta ọdịnaya enyi-enyi. Ya mere, ọ dịghị mkpa inwe isiokwu ogologo oge ma ọ bụ dee ya na ahịrịokwu ndị siri ike. Gbalịa na-enye nnukwu foto na okwu dị mfe. Ọzọkwa, ọ ga-abụ ihe dị mma iji mee ka ibe gị na-acha ọcha na ụfọdụ anya na-adọrọ mmasị ozi, dị ka pọdkastị, infographics, vidiyo, ihe oyiyi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ visual ọdịnaya nke na-eme ka ọdịnaya gị dabara maka ịgụ.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike mechaa chebara ụfọdụ akụkụ akaaka nke SEO iji mee ka ọdịnaya gị ghọtara site na engines ọchụchọ. Nke mbụ, ị ghaghị inwe nsụgharị mobile nke ọma nke ebe nrụọrụ weebụ gị, dị ka ugbu a, Google na-enye ihe kachasị mkpa maka ahụmahụ onye ọrụ-enyi na enyi, otu ugboro na maka ihe niile. Nke abuo, jide n'aka na ị nwere ihumaahịa iji nyere ndị na-arụ ọrụ ntanetị aka site n'iji nlezianya na-agagharị na peeji nke gị, na-eme ka ndenye ntụgharị dị mma karị, ya mere ọnọdụ dị elu na SERPs. N'ikpeazụ, echefula na ị ga-echefu nlezianya anya na akụkụ mbụ nke nyocha njikarịcha, dịka akwụkwọ ntinye ọsọ, metadata (dị ka nkụnye eji isi mee, URL, snippets na nkọwa), na, n'ezie, njikọ gị dị n'ime.